warkii.com » Muxuu Frank Lampard Ka Yiri In Man City Loo Ogolaaday Champions League & Rajadii Ay Kooxdiisa Ka Qabtay Ganaaxooda?
Muxuu Frank Lampard Ka Yiri In Man City Loo Ogolaaday Champions League & Rajadii Ay Kooxdiisa Ka Qabtay Ganaaxooda?
Frank Lampard ayaa sheegay in kooxdiisa Chelsea aysan marnaba ku duceysanin in Man City ay ku guuldareysato racfaankii ay ka qaadatay xayiraadii laga saaray Champions League.
Saaka oo Isniin aheyd maxkamada sarre ee isboortiga ayaa xaqiijisay in lalaalay ganaaxii labada sanno ee ay UEFA ka saartay Manchester City ka qeyb qaadashada Champions League, ganaaxii lacageed ee 32 milyan euro laga dhigay 11 milyan euro.
Haddii City laga ganaaxi lahaa Champions League xilli ciyaareedka soo socda, markaas koox walba oo ku dhameysata kaalinta shanaad ee Premier League ayaa u soo bixi laheyd tartanka.
Laakiin go’aankii maanta ka dib, kaliya afarta kooxood ee ugu sareysa Premier League ayaa ka ciyaari doonta Champions League xilli ciyaareedka soo socda.
Markii la weydiiyay racfaankii ay ku guuleysatay ee Man City, Lampard ayaa ku jawaabay: “Dhexdhexaad ayaan ka ahaa rintaan. Wax badan kama ogi kiiskaan. Waxaan dhageystay natiijada sida qof walba saaka.
“Xaqiiqdii ma sii eego wax ka baxsan kulamada inoo horay. Waxaa inoo haray kulamo yar haatan, waxaan dooneynaa inaan badino, ka dibna waan arki doonaa haddii aan u soo baxno Champions League xilli ciyaareedka danbe.
“Marnaba kuma tashaneynin ganaaxa Man City iyo inaan heleyno boos dheeri ah oo loogu soo baxayo tartanka.
“Nafteena ayaan ka walwalsanahay, haddii aan badino kulamada inoo haray, waan u soo bixi karnaa Champions League.
“Waxaan ku jirnaa kaalinta 3aad, sida aan hore u sheegay wax walba anaga ayay nagu xiran tahay, ma jeclaan laheyn in ciyaartoydeyda ay ku fekeraan inuu jiro boos dheeri ah oo lagu soo bixi karo si ay isku dhigtaan. Ma ahan inay sidaasi noqoto. Waxaan qabaa in cadaadiska uu mar walba taagnaa, kaliya haatan waxaa kala cadaatay boosaska loo tartamayo.”